ကားရပ်နားကွင်းတက်ရောက် Access ကို Multi-ရုပ်သံလိုင်း Reader ကို Module, custom Multi-ချန်နယ် ID Card ကို Reader ကို Module, multi-ရုပ်သံလိုင်း Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို Module
 » hardware » module / အင်တင်နာ
ကားရပ်နားကွင်းတက်ရောက် Access ကို Multi-ရုပ်သံလိုင်း Reader ကို Module, custom Multi-ရုပ်သံလိုင်း Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို Module
module / အင်တင်နာ 5-Way RFID Reader Module, custom Multi-ချန်နယ် ID Card ကို Reader ကို Module, Custom Multi-way Access Control Reader Module, Custom Multi-way Parking Lot Reader Module, multi-ရုပ်သံလိုင်း Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို Module, Multi-channel Parking Lot Reader Module, Parking Attendance Access Multi-channel Reader Module
operating အကြိမ်ရေ: 1251KHz ± kHz
အလုပ်လုပ် mode ကို: သာဖတ်ရန်
ပံ့ပိုးမှုကဒ်: uEM4001 / uEM4102 သို့မဟုတ်သဟဇာတ EM ID ကိုကဒ် (125kHz, 64-အပိုင်းပိုင်းခွဲ, 64-နည်းနည်းမန်ချက်စတာ encoding က)
Reading အကွာအဝေး: max ကို 6cm, အကွာအဝေး sensing ကဒ်အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အင်တင်နာအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်
နည်းလမ်း Reading: အမိန့်အရသိရသည်ကဒ်ကိုဖတ်
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -10℃ ~ + 75 ℃
module အရွယ်အစား: 28.329.6mm ×
SMRF125-5 reader module is mainly used in parking lot, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, တက်ရောက်သူ, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, channel and other systems.
The module input/output is TTL-RS232 ASCII data output (serial output, TTL အဆင့်အထိ) 9600 bps,ဎ,8,1 (baud rate ကို 9600 no check digit data 8 နည်းနည်း 1 stop bit) (can also output according to customer requirements).
I am interested in your product Parking Lot Attendance Access Multi-channel Reader Module, custom Multi-ရုပ်သံလိုင်း Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို Module
prev: 125kHz သတ်မှတ်ခြင်းကိုဖတ်သာ Module, ချိတ်ဆက်မှု ID ကိုကတ်စာဖတ်ခြင်း Module
နောက်တစ်ခု: 1 Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဝန်ထမ်းရေးရာနေရာချထားခြင်းအဘို့အမီတာရှည်အဝေးသင် 125KHz အမြင့်ပါဝါကိုဖတ် Module
125kHz သတ်မှတ်ခြင်းကိုဖတ်သာ Module, ချိတ်ဆက်မှု ID ကိုကတ်စာဖတ်ခြင်း Module
ISO15693 Protocol ကိုမြင့်ပါဝါ Long-အကွာအဝေး Multi-အင်တင်နာ 4-ရုပ်သံလိုင်း Motherboard
တံဆိပ်ခေါင်း Hole Multi-protocol ကို IC Module, အနိမ့်ပါဝါ 15693 module, embedded DESFire Card ကို Module, CPU ကိုကတ် Module